Qaar ka mid ah dadka isticmaala iPhone, waa quruxsan fudud si photos daro si iPhone. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadka isticmaala cusub iPhone ma garanayaan sidii ay sawiro in lagu daro in iPhone. Waxaa jira siyaabo badan oo aan dajiyaan karaa sawiro iPhone ka PC. Laakiin marka hore waxaan doonayaa in aan uga wada hadlaan in sida aan si iPhone ku dari kartaa sawiro la Lugood.
Ku dar sawirada kombiyuutar si ay iPhone isticmaalaya Lugood
Marka aynu ka hadlayno sawiro ka our PC la Lugood ugu horeysay ee la qabto waa in wareejinta iPhone, waa in aad iPhone lagugu xiro in aad PC dhex cable xogta. Ka dib markii ay sidaas samaynaya ka hor uun tago oo aan bilowno Lugood ka dibna akhri iyo raac tilmaamaha hoose siiyo.
In aad PC, la abuuro gal ah la sawiro aad loo doortay wareejinta.
Hadda soo socda, in Lugood tago oo riix magaca qalab muuqata ka, ka dibna uu goluhu xaq waxaa jiri lahaa tab Photo ah. beddelato in.
Dooro folder aad abuuray markii kaalinta koowaad.
Wax la soo dhaafay in aad sameyso waa, aad dhaqaajiso dulqabo in badhanka Codso oo ka dhacay, waxa ay bilaabi doonaan in ay nuqul sawiro ka Computer si aad iPhone
Haddaba kanu habka keliya ee loo isticmaali karaa in sawiro ama wixii macluumaad kale oo muhiim ah wareejiyo ka PC si iPhone ma aha. Halkan waxaan doonayaa in aan ka wada hadli on hab kale oo kaa caawin kara in qofka ku darto si uu iPhone si fudud sawiro ka Computer shakhsi aan Lugood.
Ku dar Photos si iPhone ka computer aan Lugood
Software ayaa loo isticmaalaa in lagu sawiro daro si iPhone ka computer aan Lugood waa TunesGo Wondershare. Waa aalad cajiib ah taas oo ka caawisa dadka isticmaala in ay ku riday photos, songs, videos, iyo in ka badan ka computer si iPhone. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida loo isticmaalo.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi TunesGo Wondershare on your computer. Waxaa Launch iyo xiriiriyaan iPhone la your computer via cable USB ah. Ka dib markaas, waxaad ka arki kartaa software helo telefoonka si toos ah.
Tallaabada 2. Photos Click galeeysid bidix. Ka dibna waxaad arki kartaa jiro button Add ah. Waxaa Click to dhirtuba photos on your computer. Dooro kuwa doonayay oo guji OK si loo saaray aad iPhone.
1.How si loo hubiyo kaydinta iPhone
Dabcan, waxan ka dhigaysa users badan welwelin. Marka aad ku saabsan in la qaato sawir yihiin, ama aad wax ku arkay video ah oo aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo, ama codsiga in aad u malaynayso inaad gacan ka gaysan doonto in hab qaar ka mid ah, farriin u muuqataa "Device ma laha boos ku filan". Hadda waxan u badan tahay in ka yar in ay ka dhacaan haddii aanu qofku hubiyo xasuusta uu telefoonka ee. Su'aashu waxay tahay sida loo hubiyo xusuusta aad iPhone?
Si aad u aragto kaydinta ee la heli karo aad iPhone:
Tallaabada 1. Marka hore aan bilowno App u Dejinta iyo guji Guud.
Tallaabada 2. hor Haddaba tag oo "Isticmaalka" jaftaa iyo sii hoos boggan ugu dhaadhacaya. Tubada Isticmaalka ay u fiiriyaan kaydinta la isticmaalay oo laga heli karo.
Halkan waxa aad ka tagaan. Tani waa sida aad eegi kartaa xaaladda oo bannaan oo ka tagay on your iPhone. Hubinta intii aan kala sooc lahayn run ahaantii waxaad badbaadin kartaa wax badan oo ka mid ah madax-xanuun iyo waqti.
2.How si aad u hesho meel bannaan oo dheeraad ah oo loogu talagalay iPhone
Sida ay haatan waxaan ku gartaan si loo hubiyo meel bannaan oo laga heli karaa boggayaga iPhone, su'aasha xigta ee weyn waa, haddii ay meel bannaan oo ay yar tahay, sida loo helo meel bannaan oo dheeraad ah oo aad iPhone.
1). Wax First hore. Waa in aad sawiro gurmad, videos iyo heeso in aad rabto in aad sii laakiin marar dhif ah isticmaali aad iPhone si aad u computer. Markaas tan aad leedahay raad raac ah, waxaad iyaga ka saari kara ka iPhone. Tani runtii badbaadiyay meel iPhone.
2). Ka dib markii la tirtiro faylasha, waa hubaal, meel dheeraad ah la heli doonaa. Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii, faylasha tirtiray aan la tageen isla markiiba ka dib markii Kabcada_. Waxay meel ka jiraan on your iPhone, laakiin aan la arki karin. Inuu iyaga ka dhaqaajiyo ka iPhone si joogto ah, waxaad isku dayi kartaa SafeEraser Wondershare in ay ka saarto faylasha tirtiray aad iPhone.
Download Wondershare SafeEraser version maxkamad lacag la'aan ah hadda!
3). Ka saar ee files junk iyo cookies. Mar kasta oo aad isticmaasho iPhone, files junk iyo cookies waxaa lagu hayaa ahbaa. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa 1-Guji Nadiifinta in Wondershare SafeEraser in ay iyaga oo dhan ka saarto.
> Resource > iPhone > 2 Siyaabaha dar Photos si iPhone iyo Talooyin Helo Space dheeraad ah iPhone